Rwizi rurefu kwazvo pasi rose | Kufamba Nhau
Rwizi rurefu kwazvo pasi rose
Rwizi runoshamisa rweNire rwakagara rwuchitendwa kuti ndirwo rurefu kwazvo pasi, asi ko dai zvisiri? Kuyera hova idzi hakusi nyore sezvazvinonzwika. vhoriyamu.
Nyanzvi zhinji dzinopokana kuti rwizi rurefu kwazvo papuraneti zvechokwadi iAmazon. Asi nei paine kukakavara kwakanyanya pamusoro penyaya iyi? Ndeupi chaizvo rwizi rurefu kwazvo pasi rose?
1 Rwizi rweNile
2 Rwizi amazon
3 Aripiko makakatanwa ipapo?
4 Ndiani ane chikonzero?
Parizvino, ichi chinyorwa cheGuinness chinyorwa chiri mukukakavadzana pakati peNire neAmazon. Pachivanhu, rwizi Nile rwunofungidzirwa kuti rwakareba kupfuura makiromita 6.695 XNUMX, ayo anotangira kuEast Africa uye anoyerera achipinda muGungwa reMediterranean. Mukufamba kwaro kwese kunoyambuka nyika gumi:
Izvi zvinoreva kuti vanhu vanodarika mamirioni mazana matatu vanovimba nerwizi rweNile kuti vawane mvura uye kudiridza zvirimwa.Ukuwedzera, simba rinobva murukova urwu rwemvura runosungirirwa neAswan High Dam, kupa simba remagetsi uye kudzora mafashama ezhizha kubvira 300, gore rekuvakwa kwayo. Zvinoshamisa! chokwadi?
Sekureva kweUnited States National Parks sevhisi, Rwizi rweAmazon rwunoyera makiromita angangoita mazana matanhatu nemazana mana. Kunyangwe isiri iyo rwizi rurefu, ndiyo hombe pasi rose nevhoriyamu: ingangoita ka6.400 kupfuura Rwizi rweNile, rune kuyerera kungori 60% kweiyo yeAmazon.
Kana tikatarisa kuyerera kwayo, rwizi rweAmerica ndiye mambo wenzizi dzose sezvo rwuchikanda avhareji yemazana maviri emazana emamichubic metres pasekondi yega yega muAtlantic Ocean. Aya ndiwo huwandu hwemvura yainoburitsa kuti mumazuva mashanu chete inogona kuzadza Lake Lakeva yose (200.000 metres yakadzika uye makiromita 5 kureba). Chaizvoizvo chinotyisa.
IAmazon zvakare ine rakakura rehydrographic basin paPasi, iyo inomhanya nemunyika dzakaita se:
Sango reAmazon rinowanikwawo mubheseni rayo, rinova musha wezvipenyu zvakawanda zvemusango senge mhuka, zvinokambaira kana shiri.
Kune rimwe divi, Rwizi rweAmazon ndirwo rwakatambanuka pasi rose. Kana isingafashukire, zvikamu zvayo zvikuru zvinogona kusvika makiromita gumi nemana paupamhi. Yakakura kwazvo zvekuti kuyedza kuyambuka netsoka kwaizotora maawa matatu. Iwe unoverenga izvo chaizvo, maawa matatu!
Aripiko makakatanwa ipapo?
Sekureva kweUnited States National Parks sevhisi, Rwizi rweNile ndiyo rwizi rurefu pasi rose pamakiromita 6650 6.400 nepo Amazon iri yechipiri pamakiromita mazana matanhatu nemazana mana. Dambudziko rinomuka apo dzimwe nyanzvi dzichiti Rwizi rweAmerica rwuri makiromita 6.992 XNUMX kureba.
YeBrazil Institute of Geography uye Statistics yakaburitsa makore mashoma apfuura ongororo ichiti Amazon ndiyo rwizi rurefu pasi rose. Vakasvika pamhedziso yekuti sosi yerwizi iri pane imwe nharaunda kumaodzanyemba kwePeru pachinzvimbo chekuchamhembe sezvo zvainge zvambo nzwa.
Kuita research iyi, vesaenzi vakafamba kwevhiki mbiri kuti vagadzire kukwirira kungangoita zviuru zvishanu zvemamita. Kusvika panguva iyoyo, sosi yeAmazon yakanga yagadzwa mumupata weCarasasanta uye negomo rakafukidzwa nesinou, asi iyo Geographical Society yeLima yakasimbisa kuburikidza nemifananidzo yesataneti kuti Rwizi rweAmazon rwakatanga mumupata weApacheta (Arequipa), saka yaizove rwizi rwakareba kupfuura dzimwe nyika, kupfuura Rwizi rweNile nemakiromita angangoita mazana mana.
Ndiani ane chikonzero?
Masayendisiti munharaunda anoramba achisimbirira kuti Rwizi rweNile ndiro rakareba kupfuura mamwe ese pasi. Ndiani ane chikonzero? Hazvizivikanwe zvechokwadi nekuti nyaya yacho ichiri kupokana. Kunyangwe, uchipiwa hupamhi uye huwandu hwayo hukuru, pamwe zvingave zvakakodzera kusendamira kuAmazon.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Rwizi rurefu kwazvo pasi rose
Timisoara, ine runako rweRomania